Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaa xaq u leedahay in aad dareento amaan
Dhamaan ardayda waxa ay qax u leeyihiin in ay iskoolka ku dareemaan amaan. Sidaas ayada oo ah hadii si xun lagugula dhaqmo ama lagu dhibaateeyo waa qasab in uu iskoolka ku caawiyo.
Dhibaatayntu waxa ay ahaan kartaa waxyaabo kala duwan
Dhibaatayntu waxa ay ahaan kartaa SMS xun ama sawiro websidyada lasoo dhigo. Waxaa kale oo ay ahaan kartaa hadalo laguugu yaso iyo hadalo lagaa faafiyo. Waxa ay ahaan kartaa in lagu caayo, gaar laguu sooco ama lagu cidleeyo. Waxaa kale oo ka tirsan dhibaatooyinkaas hanjabaada, lagu tuuro ama dilka. Waxa ay ahaan kartaa maalinti inta iskoolka la joogo ama habeenki. Waxaa kale oo ay ahaan kartaa iskoolka ama websaydyada.
Dhamaan inta iskoolka joogta waa in ay iskula dhaqmaan ixtiraam
Waxaad dareemi kartaa in sixun lagugula dhaqmay ama dhibaatooyin kuu gaysteen ardayda kale, macalin ama qof kale oo wayn oo iskoolka ka tirsan. Hadii xataa aad fikrado kala duwantihiin qofna qof ma xumayn karo, ma dili karo, ma dhibaatayn karo ama mala cidlayn karo. Taana waxa ay qusaysaa dadka waawayn iyo ardaydaba.
Hal marba ha ahaatee
Hadii si xun laguugula dhaqmo ama lagu dhibaateeyo waa in aad u sheegtaa qofka iskoolka jooga ee weyn. Hadii ay taa kugu adagtahay waxaad u sheegi kartaa oo la hadli kara waalidkaa ama qof kale oo weyn, si ay iskoolka ula hadlaan.
Iskoolka waxaa qasab ku ah in uu wax walba oo awoodiisa ah uu sameeyo si uu toos kuu caawiyo. Xataa ha ahaato halmar dhacdo ah. waxa aad muhiim u ah in aad dareento amaan iyo caafimaad marka aad iskoolka joogto.
Iskoolka waa qasab in uu ku caawiyaa
Nuuckasta oo dhibaatooyin ah oo iskoolha la xiriira waa in la baaraa. Xataa ha ahaato halmar dhacdo ah oo ka dhacda iskoolka ama meesha waqti firaaqda la joogo. Markasta waa iskoolka shaqadiisa in uu joojiyo.
Hadii aanad caawinaad helin
Hadii uu iskoolka ku caawini waayo anaga ayaa nagu soo dacweyn kartaa. Hadii aad doonayso in aad dacwo u dirto kormeerayaasha iskoolka iyo wakiilka carruurta iyo ardayda waxaa fiican in aad qof weyn caawinaad waydiisato. Hadii aan aragno in uu iskoolka jabiyay sharciyada Waxaan qasab kaga dhigayna in ay wax ka qabtaan, si uusan dhibaatooyinku u sii soconin. Halkan wax badan ka aqriso:
Anaga waad nagu soo dacwaynkartaa